US/16A (3.6KW) Ndị na -emepụta ihe & ndị na -eweta ya | Ụlọ ọrụ China US/16A (3.6KW)
Level2 5meter 16A Ụdị 1 chaja EV maka eriri chaja ụgbọ ala eletrik
Ọnụ ego China dị ọnụ ala China EV Charger, USB Charging Cable, Anyị nwere ike nye ndị ahịa anyị uru zuru oke na ogo ngwaahịa na njikwa ọnụ ahịa, ma ugbu a anyị nwere ebu dị iche iche site na otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe ruo otu narị. Dị ka ngwaahịa na -emelite ngwa ngwa, anyị na -eme nke ọma n'ịzụlite ọtụtụ ngwa ahịa dị elu maka ndị ahịa anyị wee nweta aha ọma.
Ngalaba chaja ọkwa 2 nwere ụdị Mpụta 1 16A 3.5kw
Anyị na -akwado ndị ahịa anyị ezigbo ngwaahịa kacha mma yana ọrụ ọkwa dị elu. N'ịghọ onye nrụpụta ọkachamara na mpaghara a, anyị enwetala ahụmịhe ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma n'ịmepụta na ijikwa maka OEM Supply China 16A SAEJ1772 Electric Chargeing Unit nwere eriri USB 1, Anyị na -edobe usoro nnyefe oge, atụmatụ ọhụrụ, mma kachasị na nghọta maka anyị. ndị na -azụ ahịa. Moto anyị kwesịrị ịbụ ịnye ngwaahịa dị mma n'ime oge akọwapụtara.